Vaovao Tsara · Marsa, 2015 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Tsara · Marsa, 2015
Avrily 2016 13 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Vaovao Tsara tamin'ny Marsa, 2015
Pero : Mpitsangatsangana Amoron-dranomasina Nanao Tohivakana Hamonjena Ireo Mpilomano Saika Maty An-Drano
Amerika Latina29 Marsa 2015
Ny fahitana ny firaisankina nasehon'ireo mpilomano teo amin'ny moron-dranomasin'i Arica ho fanavotana ireo olona sasany tamin'ny alàlan'ny tohivakan'olombelona dia mahatonga ahy hino ny amin'ny maha-olona !
Katsuo Ningen, Lohan-trondro Notapahana Miendrika Olombelona Mambabo Ny Fon'ny Japana
Azia Atsinanana14 Marsa 2015
Ao amin'ny firenena zatra sarim-biby famantarana (maskoty) hafakely, na dia ny Japoney aza somary gaga tamin'ny "Lehilahy Bonito," fantatra kokoa ao amin'ny firenena ho Katsuo Ningen, izay misolotena ny prefektiora lavi-dalana mitoka-monina indrindra ao Japana.
Tafaverin'ireo Mpikatroka Nomerika Amin'ny Toerany Ny Grani.Ru Sy Ireo Tranonkalam-baovao Hafa Voasivana
Azia Afovoany sy Kaokazy13 Marsa 2015
Mampiasa ny teknikan'ny didom-pitaratra manamaro isa ny fidirana amin'ireo habaka sivy voasivana sy hametraka ny dindony ao anatin'ny lohamilin'ireo orinasa goavan'ny aterineto ny mpikatroka hahamora ny fidirana aminy
Balafomanga Mandeha Amin'ny Vatomamy? Nekena ny Fanamby!
Azia Atsinanana12 Marsa 2015
Olona manerana an'i Japana no nandray anjara tamin'ny Tetikasa Balafomanga Vatomamy, miditra an-tsehatra amin'ny fandefasana balafomanga. Nampiakatra ny vokatra azo tao amin'ny lahatsary Youtube ny mpanamboatra vatomamy UHA Mikakuto .
Tonga Any Amin'ny Rafi-Panabeazan'ny Sekolim-panjakana Ao Puerto Rico Ny Fomba Fijery Ny Mitovy Lenta
Amerika Latina11 Marsa 2015
"Na dia tsy ny tanjona farany aza izy ity, dia ho fitaovana mahazendana hanome vàhana ny zon'olombelona ao Puerto Rico ity dingana ity."
Herinandrom-Piainan'Ilay Lehilahy Mpikarama Isam-Bolana Ao Tokyo
Nalaza tao amin'ny aterineto ny lahatsary vao haingana nampiakarin'ilay vlogger YouTube mavitrika "Stu in Tokyo", izay nahatratra maherin'ny atsasaky ny tapitrisa sahady ny nijery izany. Manasongadina ny ora fiasana lavabe ao Japana, sy ny famahan'ny governemanta ny olana ny lahatsary
Mijoro ny Fiaraha-Mientan'Olo-tsotra Taorian'ny Tondra-drano Teto Madagasikara
Afrika Mainty04 Marsa 2015
Fandraisana an-tanana telo ho fanampiana ireo tra-boina eto Madagasikara